LAMA FILAAN: Arsenal Oo Amaah Kale Ku Diraysa Saxeexa Ay Jamaahiirtu Sugaysay Ee William Saliba & Sababta Lagu Qanci Karo Ee Ka Dambaysa - Gool24.Net
LAMA FILAAN: Arsenal Oo Amaah Kale Ku Diraysa Saxeexa Ay Jamaahiirtu Sugaysay Ee William Saliba & Sababta Lagu Qanci Karo Ee Ka Dambaysa
October 3, 2020 Apdihakem Omer Adam
Kooxda ree London ee Arsenal ayaa la xusayaa inay wadahadalo kula jirto dhigeeda ree France ee Rennes oo doonaysa inay qaab amaah ah kaga qaadato daafaca dhexe ee da’yarka ah ee William Saliba.
Rennes ayaa markeedii ugu horreysay ciyaaraysa tartanka UEFA Champions League ayaa isku diyaarinteeda ku darsatay inay calaamadsatay 19 sano jirka daafaca dhexe ee Arsenal kaas oo ay mid adag u muuqato rajadiisa shaxda kooxdu.
Sida uu sheegayo wargeyska France kasoo baxa ee Ouest-France, Rennes ayaa tan iyo Khamiistii doonaysay saxeexa Saliba, xiddigan ayaa ahaa mid ay jamaahiirta kooxdiisu ku rajo weynaayeen inuu fursad heli doono.
Saliba ayaa xagaagii sanadkii hore ee 2019 heshiis 29 Milyan oo Pound ah ugaga soo wareegay Arsenal dhinaca kooxda Saint-Etienne kahor intii aan isla kooxdaas deg-deg heshiis amaah ah loogu celin.
Laakiin dhaawacyo is-daba joog ah ayaa saamayn balaadhan ku yeeshay horumarka William oo la filayay inuu shaxda Mikel Arteta daafaceeda dhexe kula midoobi doono saxeexii xagaaga ee Gabriel Magalhaes.
Su’aalaha ka taagan mustaqbalka Saliba ayaa ahaa kuwo sii kordhay kaddib markii uu bedel aan la adeegsan ka noqday ciyaartii ay guusha rigoorayaasha ah kooxdiisu kasoo gaadhay Liverpool Khamiistii.
Sababta macquulka ah ee ay warbaahinta France sheegayso ee ay Gunners da’yarkan ugu fasixi karaan amaah kale oo dalkaas ah ayaa ah in dhawaan ay geeriyootay hooyadii sidaas darteed uusan mooral ahaan fiicnayn oo la doonayo inuu ka ag-dhawaado qoyskiisa oo halkaas jooga